Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 31/03/2021)
zvitima, kusiyana mabhazi, rwendo ngaatarire kuburikidza mumaruwa. Izvi zvinoreva kuti pane nokudhiraivha panguva bhowa mugwagwa, kana mari maawa nyore kutamira kubva panzvimbo nenzvimbo, une mukana ona zvakawanda yako nyika akasarudzwa. Kamwe wagadzirira kutamira pana yako inotevera rwendo, muchawana ikoko pasina nguva. High-nokukurumidza Dzidzisai maringe Bus mu Europe. Chiri hapana-brainer.
By 'hapana mumigwagwa yakawandisa motokari', hatirevi 'hapana zvinozipa anorova'. We kureva hapana Kuwandisa kwemotokari mumigwagwa. Ndicho chinhu pamusoro njanji nezvemakwara - hapana ichivharira nzira. Ndivo achirurama mutsetse kodzero kwauri kuenda.
On a Train, you have total flexibility; chete vanoenda uye kusvetuka pamusoro yaanopinda anorovedza huenderane zvirongwa zvenyu.
#bustravel bhazi europetravel longtrainjourneys Chiteshi chechitima chitima mazano Train Travel TrainVSBus traveltips